यलु जोशी चैत्र २८, २०७७ शनिबार
भक्तपुरमा बिस्काः (बिस्केट) जात्रा शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ । कोरोना सङ्क्रमण हुने खतरा भएको भन्दै औपचारिक पूजामा सीमित गर्ने भनिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रथ तानेर नै मनाइँदैछ तर भीडभाड नगरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ जात्रा मनाइने छ । आठ रात नौ दिन मनाइने भक्तपुरको ऐतिहासिक बिस्काः जात्रा वैशाख ५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबार भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा सुरु गरिने छ । भैरवनाथको रथ टौमढीबाट पूर्वमा...
रथ निर्माणमा जुटे स्थानीय
यलु जोशी चैत्र २१, २०७७ शनिबार
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महìव बोकेको भक्तपुरको बिस्काः (बिस्केट) जात्राको रथ निर्माणमा स्थानीय जुटेका छन् । अहिले भक्तपुरको टौमढिस्थित ङातापोल्हँ अर्थात् पाँच तले मन्दिर अगाडि बिस्काः जात्राका लागि भैरवनाथको रथ निर्माण भइरहेको छ । यो रथ ३५ फिट अग्लो तीन तले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिने नाइके प्रेमलाल शिल्पकारले जानकारी दिनुभयो । रथमा १० फिट अग्ला चारवटा पाङ्ग्रा हुनेछन् ।
यलु जोशी चैत्र १९, २०७७ बिहीबार
छोराछोरीहरू शृङ्गार (मेकअप) गरी टिकटक बनाउने बानी त परेको छैन ? त्यसो भए त्यो बानी हटाउनु राम्रो हुनेछ । अभिभावकले बालबालिकालाई शृङ्गार गरी दैनिक जसो टिकटक तयार पार्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरूको छालासम्बन्धी विभिन्न रोग आउने तथा आत्मविश्वास हराउने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ ।
महिनावारी हुन पीडा कम गर्न योगासन लाभदायी
यलु जोशी चैत्र १४, २०७७ शनिबार
हिलालाई महिनावारीको समयमा पेट र कम्मर दुख्न पीडाका कारण ओच्छ्यानबाट उठ्नसमेत मुस्किल पर्छ । धेरै महिलाहरुले औषधि समेत सेवन गरे पनि कम नहुने समस्या हुने गरेको पाइन्छ । चिकित्कका अनुसार यस्तो अवस्थामा औषधि सेवनगर्न खतरा हुन्छ । तर घरायसी उपचार तथा योग आसनबाट महिनावारीको समयमा धेरै सजिलो र पीडा कमहुने विशेषज्ञको राय छ । योग आसन अभ्यास गर्नाले महिनावारीमा हुने पेट तथा ढाडको दुखाई कम गराउन सकिन्छ ।
बालबालिकामा डिप्रेसनको समस्या
यलु जोशी चैत्र १२, २०७७ बिहीबार
आफ्ना बालबालिकाको आनीबानीमा अस्वाभाविक परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभएको छ ? उनीहरूमा यस्तो समस्या देख्नुभएको छ भने ‘डिप्रेसन’को सिकार भएको हुनसक्नेप्रति हेक्का राख्नुहोला । डिप्रेसन (मानसिक रोग)को समस्या वयस्कलाई मात्र हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । बालबालिकामा पनि डिप्रेसनको समस्या देखिनसक्ने बालमनोविद्हरू बताउँछन् । बालमनोविद् गङ्गा पाठकले भन्नुभयो, “चिन्ता बच्चालाई पनि हुन्छ । डिप्रेसनको समस्या उनीहरूमा पनि...
व्रतले स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ
यलु जोशी चैत्र १०, २०७७ मंगलवार
युट्युबमा हेरेर शरीरको तौल घटाउन युवापुस्ताले प्रयोग गर्ने गरेको ‘इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ’ स्वास्थ्यका लागि ठीक नभएको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतीले धार्मिक महìवका दृष्टिकोणले परम्परागत रूपमा हप्ता वा महिनाको एक दिन व्रत बस्ने चलन रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “पहिले तौल घटाउन व्रत बस्दैनथे । आध्यात्मिक रूपमा बस्ने प्रचलन थियो तर खानपिनमा आएको परिवर्तनले मोटोपनको समस्या सिर्जना गरेपछि व्रत...
आफैँ परीक्षण गर्न सकिन्छ पाठेघरको क्यान्सर
यलु जोशी चैत्र ५, २०७७ बिहीबार
महिलाले लाजकै कारण पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट समस्या भोग्नु नपर्ने भएको छ । धुलिखेल अस्पतालका स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुनिला शाक्यले लाज मान्ने कारण धेरै महिलाले जाँच नै नगराउने गरेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “आफैँ जाँच गरी क्यान्सरको पूर्वावस्था पत्ता लगाउन सकिने भएको छ ।” धुलिखेल अस्पतालले तीन महिनाअघि (डिसेम्बर)देखि सुरु गरेको ‘सेल्फ स्याम्पलिङ केयर एचपीभी किट’ हालसम्म १५० महिलाले प्रयोग गरिसकेको...
महाशिवरात्रि मनाउन पशुपति आइपुगे साधु शन्त (फोटो फिचर)
यलु जोशी फाल्गुन २६, २०७७ बुधबार
महाशिवरात्रीका विभिन्न विशेषतामध्ये साधुसन्त पनि एक हुन् । विशेषगरी काठमाडौंको पशुपतिनाथमा मुलुकभित्रबाट मात्र नभई भारतलगायतका देशबाट आउने साधुसन्तहरुको संख्या पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ । यस वर्ष पशुपति विकास कोषबाट साधुसन्तलाई औपचारिक निमन्त्रण नगरेपछि पशुपतिमा आउने बाबाजीहरु कमी भएको छ ।
यलु जोशी फाल्गुन २२, २०७७ शनिबार
। शरीरको शुद्धीकरण गर्न एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने प्राकृतिक विधि पञ्चकर्म नेपालमा पनि लोकप्रिय भइरहेको छ । आयुर्वेदप्रतिको आस्था विश्वास हराए पनि पञ्चकर्म विधिले धेरै पुरानो रोग निको गरेको आयुर्वेदिक चिकित्सकको दाबी छ । शरीरलाई शुद्ध बनाउन र रोगव्याधीबाट थलिएकालाई पुनर्जीवन दिनका लागि उपयोगी मानिने पञ्चकर्मप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको कार्यकारी...
यलु जोशी फाल्गुन १८, २०७७ मंगलवार
पशुपतिनाथ परिसरमा हरेक साँझ हुने आरतीमा युवापुस्ता मग्न हुनेदेखि ध्यान (मेडिटेसन) गर्नेहरूको भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ । पीडा समस्या भुल्न तथा मनमा आनन्दका लागि हिन्दु धर्मका साथै बुद्ध, क्रिस्चियन धर्मावलम्बी युवावर्ग बेलुका पशुपति बागमती किनारामा पुग्ने गरेका छन् ।